Archive du 20161215
Soamahamanina Hiverina ny Sinoa ?
Nangingina tao anatin�ny fotoana elaela ny raharaha Soamahamanina. Nitsahatra aloha ny fitrandrahana taorian�ny fitokonana sy fifandonana maromaro nampifanditra ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana.
Nivadi-panekena ny fitondrana Mety ho votsotra ilay volabe 10,2 miliara�
Fepetra voalohany napetraky ny mpamatsy vola nandritra ny fikaonan-dohan�izy ireo sy ny mpitondra Malagasy tany Paris ny 1-2 desambra lasa teo ny tsy maintsy hametrahana ny fitoniana politika eto Madagasikara.
Governemanta sy depiote Hangotraka ny � Face � face � anio
Mialoha ny hamaranana amin�ny fomba ofisialy , ny fivoriana ara-potoana faharoa natrehan�ireo solombavambahoakan�i Madagasikara tamin�ity taona 2016
Lapan�ny Loholona Anosikely Volavolan-dal�na 4 no lany omaly alarobia
Ho fampandrosoana an�i Madagasikara dia lany teny amin�ny Antenimierandoholona, ny alarobia 14 desambra 2016, ny Volavolan-dal�na laharana faha-047/ 2016 tamin�ny 29 novambra 2016 ho fanomezan-dalana ny fifanarahana fampindramambola hamatsiana ny tetikasa ho fanatsarana ny Seha-panjakana na PAPSP ;
Augustin Andriamananoro Taraiky ary miady irery
Tsy dia mazava intsony ny raharaha Augustin Andriamananoro amin�izao fotoana izao, fa ny heno dia efa nentina mangingina aty an-drenivohitra ny tenany, ka na ny mpisolovava azy aza dia tsy mahalala ny antsipirihan�ny zava-drehetra.
Raharaha Claudine A&C Takon�ny fisamborana mpanohitra
Somary nangingina, takona tanteraka mihitsy aza ny mikasika ilay raharaha kolikoly avo lenta naha voarohirohy ny mpandraharaha tompon�ny hotely goavambe A&C eny Ivato sady mpanolotsain�ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, Claudine Razaimamonjy.
Taratasin�i Jean Lany andro amin�ny zesta
Manakory ry Jean ! Miala tsiny aloha fa hanisy sira ny fanaonareo indray aloha anio na dia efa mba maniry fatratra ny handoka ihany aza.
Distrikan�i Betafo Ataon�ny dahalo fialam-boly tanteraka
Ataon�ny dahalo fialam-bony tanteraka ny distrikan�ny Betafo. Ankoatry ny vaky trano madinidinka amin�ny vanim-potoanan�ny fahavaratra dia manao ny ataony ihany koa ny dahalo amin�ny halatr�omby
Antananarivo Renivohitra Hampiantrano ny faha-50 taonan�ny fiaraha-miasa amin�i Vatican
Noraisin�ny ben�ny tan�nan�Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana teny amin�ny toeram-piasany Analakely omaly ny solontenan�i Papa, ny �nonce apostolique� monsenera Paolo Rocco Gualtieri.
Fandehanan�ny mpitondra tany Paris Famatoran-tena, hoy ny DFP
Nanaporofo ny namalian�ny fitondram-panjakana Malagasy ny antson�ireo mpamatsy vola hanatrika ny fivorian�ireo mpamatsy vola izay natao tany Paris farany teo fa mbola vonona hiara-kiasa amin�ireo mpamatsy vola mahazatra ny mpitondrantsika, hoy ny DFP na ny vondrona politika dinika fanavotam-pirenena.
Faritra atsimon�ny nosy Nahazo lakandrano mirefy 25 km
Notokanan�ny filoha Rajaonarimampianina omaly tany Bezaha ny lakandrano mirefy 25 km ahafahana mamatsy rano ireo tanimbary any amin�iny faritra atsimon�ny nosy iny.
Betsaka ireo very hevitra amin�izao ankatoky ny fetin�ny Krismasy sy ny faran�ny taona izao. Ny tsy fisian-dRavola no tena antony, ka nanosika ny Banky BNI Madagascar hanomana tolotra fampindramam-bola ho an�ny rehetra nanomboka ny 6 desambra
Adin�ny kanosa !
Tsy manomboka akory ny ady dia efa mipararetra ny fanjakana ankehitriny.
Tapatapany Blueline TV
Miketrika hatrany ny fahafaham-pon�ireo mpanjifa ny orinasa �blueline�. Misongadina manokana ny hetsika fampihenana ny vidin�ireo vokatra haroson�ity orinasa fifandraisan-davitra ity eo amin�ny lafiny fampisitrahana ireo fandaharana hita ao amin�ny fahitalavitra amin�izao ankatoky ny fetin�ny Noely 2016 izao